Ungayibona kanjani i-RGB noma i-hexadecimal value yanoma iyiphi i-pixel kusikrini sakho se-Mac | Ngivela kwa-mac
Ungayibona kanjani i-RGB noma i-hexadecimal value yanoma iyiphi i-pixel kusikrini sakho se-Mac
UJesu Arjona Montalvo | | Amakhompyutha we-Mac, Izifundiswa
RGB, eyaziwa nangokuthi Bomvu / luhlaza / Luhlaza okwesibhakabhakaKuyinto a indlela yokukhomba umbala esetshenziswa ngabaqaphi bekhompyutha. Umbala ngamunye unenani lawo le-RGB, futhi lokhu kungenxa yenhlanganisela yale mibala emithathu ngokuhlangene zenza uhlobo lombala obukayo lube nethoni eyodwa noma enye. Lawa mavelu we-RGB angasetshenziselwa izizathu ezahlukahlukene, kepha ikakhulukazi kulabo abasebenza I-edishini yezithombe nezithombe, noma kungenzeka ukuthi badlala nabo ihluzo, nokuthi kubalulekile ku Umklami wewebhu.
Isici esaziwa kancane sakhe Mac ukuthi uhlelo lwakho lokusebenza luza nemitha leyo ingakhomba i-RGB nombala we-hexadecimal we-pixel yesikrini noma esikhundleni sakho Iphephadonga onalo kudeskithophu yakho, futhi kulesi sifundo sizokukhombisa ukuthi kwenziwa kanjani.
1 Thola inani le-RGB lanoma iyiphi i-pixel kusikrini sakho se-Mac.
2 Ungayithola kanjani ngefomethi ye-hexadecimal.
Thola inani le-RGB lanoma iyiphi i-pixel kusikrini sakho se-Mac.
Noma ngabe uzama ukuguqula isithombe, futhi udinga ukushintsha ithoni yombala noma ku- I-Adobe Photoshop o I-Pixelmator, noma uzama ukwenza isithombe esincane esincanyana, ukwazi amanani we-RGB wephikseli endaweni ekhona kungasiza kakhulu ekufezeni imiphumela yombala oyifunayo.
I-Mac yakho iza ifakwe insiza ebizwa 'Imitha Yemibala Yedijithali', futhi ungatholakala ku- I-Launchpad> Abanye ethekwini (ungabona kanjani esithombeni ngenhla).
Ngemuva kokuqala uhlelo lokusebenza, Ungahudula isikhombi noma kuphi lapho ufuna khona esikrinini, futhi izokhombisa umbono okhulisiwe wendawo ekhomba kuyo, futhi igcizelela ukuthi yilokho kanye okulinganayo, lapho futhi khetha amafomethi amaningi njengomdabu, I-P3, i-sRGB, i-generic RGB, i-Adobe RGB, yy L * a * b *.
Kulesi sibonelo, ngilinganisa umbala RGB kwengxenye yentaba ye-Wallpaper eza ngokuzenzakalela kudeskithophu ye- I-OS X El Capitan.
Njengoba ukwazi ukubona, amanani abomvu angama-88, ahlaza okotshani angama-33, futhi aluhlaza okwesibhakabhaka angama-40. Ungasebenzisa lawa manani afanayo kuhlelo lokusebenza olufana nalolu I-Adobe Photoshop o I-Pixelmator ukwenza imibala efanayo oyisebenzisela ukuhlela isithombe.
Ungayithola kanjani ngefomethi ye-hexadecimal.
Isibonisi se-RGB siyisiqalo seqhwa eline- 'Imitha Yemibala Yedijithali' ku-Mac yakho. Ingasetshenziselwa ukufinyelela amanani ombala we-hex, awusizo ku- abaklami bewebhu abazisebenzisayo CSS y i-HTML njalo. Njengomklami nomakhi wezithombe, kimi kubalulekile, kuphi Imvamisa ngisebenzisa izandiso kuziphequluli ukwenza lo msebenzi oyisidina ube lula kimi.
Ukushintsha kusuka kumanani Idesimali ejwayelekile ye-RGB kumanani we-hexadecimal, kuzofanela uchofoze kuthuluzi 'Imitha Yemibala Yedijithali' ukushintsha imenyu yakho ibe ngeyakho, bese uqhafaza Bonisa > Ukhombisa amanani> Ngohlelo lwe-hexadecimal ukushintsha amanani kule fomethi.
Yize kungesona isici esizosetshenziswa nsuku zonke, ngaphandle kwezimo ezithile, i- 'Imitha Yemibala Yedijithali' kuyisici esilula kakhulu i-OS X esinaso, nokuthi ekuqaleni bengingeke ngisithole ngize ngiqale ukuhlola ifolda yami yezinsiza ngokujule, yingakho bengifuna yabelane ngayo nabo bonke abafundi beSoy de Mac. Lapho ngiyithola, ngaqala ukuyisebenzisa ngaso sonke isikhathi ukuhlela isithombe, ikakhulukazi ngombala, kwaqondana nokuhlelwa kwesithombe engikusebenzisa ikakhulukazi kule webhusayithi.
Ungahle ube nentshisekelo kulezi zifundo:
Ungasisebenzisa kanjani isikhungo sezaziso kusuka kukhibhodi yethu.
Ukufihla izinto kumenyu yezintandokazi zesistimu.
Sebenzisa noma yiluphi uhlelo ku-Mac yakho noma ingaveli ku-Mac App Store.
Finyelela kumlando wakho wokuphequlula ngesinqamuleli sekhibhodi esilula.
Ukusetshenziswa kwalokhu kusebenza kunokusebenzisa kulinganiselwe impela, futhi kumsebenzisi ojwayelekile kungahle kungasizi ngalutho, futhi kochwepheshe ku- design kanye namakhasi e-web Kungakhawulelwa impela, kepha akukaze kubuhlungu ukwazi lokhu kusebenza.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungayibona kanjani i-RGB noma i-hexadecimal value yanoma iyiphi i-pixel kusikrini sakho se-Mac
Mini Calendar, mahhala isikhathi esilinganiselwe se-OS X
ICarPlay ifinyelela kumamodeli amaningi, kulokhu ivela kubakhiqizi iHyundai